NVIDIA kwuputara nzụta ARM maka ijeri $ 40 | Site na Linux
NVIDIA kwupụtara nzụta ARM maka ijeri $ 40
SoftBank kwetara ire Arm Armings na ụlọ ọrụ america Nvidia ruru $ 40.000 ijeri (Billion 33.700 ijeri), na-agwụ afọ anọ nke inwe.
A na-atụ anya inweta nnweta a na Machị 2022, n'okpuru ọtụtụ ndị isi iwu na-achị ụwa niile. Nvidia ga-akwụ ihe karịrị ọkara ($ 21.500 ijeri ma ọ bụ € 17.700 ijeri) na ya mbak.
Ọnụ ego nke ijeri dollar 40 bụ ego kachasị elu, n'ihi na ịkwụ ụgwọ nke ụzọ nke 5 ijeri dollar (4,2 ijeri euro) ga-abụ ego ma ọ bụ na mbak nke Nvidia na mgbakwunye na nke ahụ ga-enwe ọnọdụ «iji nweta site Ogwe aka na ebumnobi doro anya nke arụmọrụ ego, "otu US kwuru.
A na-atụ anya na SoftBank Group ga-ejigide n'etiti 6,7% na 8,1% nke nhatanha Nvidia mgbe azụmahịa ahụ gasịrị.
Ọ bụ ezie na NVIDIA ga-ejigide nnwere onwe ARM: 90% nke mbak ga-abụ nke NVIDIA na 10% ga-anọgide na Softbank.
Nvidia na-ezube ịnọgide na-eji ụdị ikike ikike emeghe, zere ika mergers na-ejigide ya UK n'isi ụlọ ọrụ na nnyocha ụlọ ọrụ, plus lA ga-eji teknụzụ NVIDIA kwalite ikike ọgụgụ isi nyere ikikere nke ARM.
Ogwe aka R & D dị ugbu a ga-agbasawanye na mpaghara usoro ọgụgụ isi, mmepe nke ga-enweta nlebara anya pụrụ iche.
Ọbụna maka nyocha n'ọhịa nke ọgụgụ isi, ezubere ya iwu kọmpụta komputa ọhụrụ dabere na teknụzụ ARM na NVIDIA.
Ọrịre ahụ na-etinye isi ihe na-eweta Apple Inc na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ n'okpuru otu onye ọkpụkpọ egwu ga-echekwa mmegide sitere n'aka ndị na-achịkwa na ndị asọmpi sitere na Nvidia, ụlọ ọrụ mgbawa kasịnụ na United States maka isi ahịa ya.
Nnweta ahụ, n'okpuru iwu nchịkwa iwu, gụnyere na Britain, United States na China, nwere ike bụrụ na a ga-enyocha ya na China, ebe ọtụtụ puku ụlọ ọrụ, site na Huawei ruo obere mmalite, na-eji teknụzụ.
Nvidia bụ onye nrụpụta kasịnụ nke ndị na-ese ihe osise na-agbasawanye ojiji nke ihe eji egwu egwuregwu na mpaghara ndị ọhụrụ, dịka nhazi ọgụgụ isi na-arụ ọrụ na ebe data na ụgbọala ndị kwụ ọtọ.
Ijikọta ikike nke aka gị na ngalaba nhazi nke etiti nwere ike inye gị ohere ịchụkwudo ma ọ bụ ọbụlagodi Intel na Advanced Micro Devices.
"Have ga-enyocha ma usoro CPU na GPU na nke ahụ gụnyere ebe data," ka o dere na ndetu, na-ezo aka na ngalaba nhazi nke etiti na usoro nhazi eserese. “Ebumnuche, Nvidia chọrọ nhazi ihe eji arụ ọrụ nke nwere ike ịbanye na ụzọ GPU ya, dị ka ọ dị na AMD na Intel. «
Uru nke ngwaahịa Nvidia nwere ihe karịrị okpukpu iri abụọ n'ime afọ ise gara aga, na-enye ụlọ ọrụ ahụ ikike imechi nnukwu azụmahịa. Ọnụ ahịa ahịa Nvidia arịgola ihe karịrị ijeri $ 260 n'oge ahụ, gafere Intel.
Companylọ ọrụ ahụ agbatịwo akara ngosi nke ndị na-eme egwuregwu na-eji ndị egwuregwu eme ihe na mpaghara ọhụrụ, dị ka nhazi ọgụgụ isi na ebe data. O gosiputala onwe ya n'ahia ahia nke usoro nke na enye ike ugbo ala.
Nkà na ụzụ Arm, nke mepụtara na Cambridge, England, na-akọwapụta mkpụrụ ndị dị mkpa maka ọtụtụ elektrọnik ọgbara ọhụụ, gụnyere ndị na-achịkwa ahịa ama ama, mpaghara nke Nvidia jisiri ike tinye iji mejuputa ngwaahịa ya.
Ndị ahịa, gụnyere Apple Inc., Qualcomm Inc., Advanced Micro Devices Inc. na Intel Corp., nwere ike ịchọ mmesi obi ike na onye nwe ụlọ ọhụrụ ga-aga n'ihu na-enye nnweta nnweta ka ogwe aka nkuzi.
Ebe ọ bụ na ọ bụ nchegbu ndị a mere ka SoftBank, ụlọ ọrụ na-anọpụ iche, zụta Arm n'oge ikpeazụ ọ na-ere ere na-enweghị mmeghachi omume dị ukwuu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » NVIDIA kwupụtara nzụta ARM maka ijeri $ 40
Enwere m olile anya na ndị na-arụ ọrụ RISC tinyere ọgụ zuru oke iji dozie ihe
Ọfọn, m na-ahụ ya dị ka ihe na-adịghị mma maka anyị na-atụle nkwado ọ na-enye Linux.
Ka o sina dị, ogwe aka m ekwenyeghị m, karịsịa ebe ọ bụ na a na-ekwukarị MIPS na m nwere na nke a ka mma ma rụọ ọrụ nke ọma ọ bụ ezie na ọ nwere ụfọdụ agwa na ikikere dịka ogwe aka.
Ana m ekwu ya ogologo oge. Maka m ọdịnihu bụ RISC-V ma ọ bụ onye pụrụ ime ihe nile OpenPOWER nke bụkwa ngwaike n'efu.
TikTok kpughere ụfọdụ nkọwa banyere etu algorithm ya si arụ ọrụ